Kungani uSimona no-Angela? - Ukubalwa phansi kuya eMbusweni
Imiyalezo evela kuSimona no-Angela
USimona - uJesu, uNkulunkulu Onxiba
Ukulinda ngesandla eseluliwe.
U-Angela - Isikhali Sokunqoba
Ningazivumeli ukuba nikhohliswe okubi.
U-Angela - Vuka Nami
Ungalahli ithemba, noma ngabe kumnyama kubomvu.
Angela - Thandazela iSonto Lami Elithandekayo
Hlala nami ngaphansi kwesiphambano.
USimona - Thembela Ezikhathini Ezinhle Nezimbi
Ngeke alibele ukufika.
U-Angela - Icala selifikile manje
Thandaza iSiphepho sisuke kude nemindeni yakho ...
U-Angela - Udrako Omkhulu
Amadoda athembela kakhulu kusayensi kunoNkulunkulu.
USimona - Ukugijimela Abaprofethi Bamanga
Ukufuna ukuthula nothando ezindleleni ezingalungile.
Angela - Ngicela Ungilalele
U-Angela - Uthando Lwabaningi Luzophola
Ukuthula kusongelwa ngabanamandla.
... futhi awusakwazi ukuyibona.
... ngeke ukwazi ukunqoba izivivinyo.
USimona - Sicela Uvule Izinhliziyo Zakho
Vumela uJesu angene empilweni yakho.
ISimona - Umbono weSt
... nensali yabapristi abathembekile.
U-Angela - Baningi Abashiya Isonto
Kepha ngisondele kuwe.
Angela - Isonto Lidinga Umkhuleko
Thandaza ukuze ukholo lweqiniso lungalahleki.
USimona - Izikhathi Ezinzima Zikulindile
Thandazela amadodana ami awathandayo, abapristi.
Simona - Uthando, Izingane, Uthando
Kukuwe wedwa ukunquma ngempilo yakho.
U-Angela - Funda iZwi likaNkulunkulu
Kumele aziwe emiBhalweni.
USimona no-Angela - Thandazela uPapa
Izinqumo zamathuna zincike kuye.
U-Angela - Izikhathi Ezinzima Zikulindile
Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi anikakulungeli nonke.
USimona no-Angela - Manje Isikhathi Sokukhetha
Kuphakathi kokuthi ukanye noKristu noma umelene Naye.
Angela - Asikho Isikhathi Esithile
Ngiyacela ungilalele uyeke ukukhathazeka ngezinto ezingadingekile.
U-Angela - Abapristi Abawayo
Angela - Udinga Umthandazo
Ungakholelwa ukuthi ungazixazulula izinkinga zakho wedwa.
USimona - Umama noma uMercy
UJesu ulinda ngezandla ezivulekile.
Angela - Thandazela uMmeli
ISonto kufanele libhekane nokulingwa nosizi.
U-Angela - Ubuntu buthi bufuna ubulungiswa
... kodwa ngokuya ngokuhamba kude nomusa.
USimona - Umhlaba Udinga Umkhuleko
Umthandazo kuphela ongahambisa izintaba.
Angela - Ungesabi
Nginifakele nonke ngengubo yami.
USimona - Ngizohlangana Ukuqoqa Ibutho Lami
Yibani nilungele, bantwana bami, niqine, nime niqinile ekukholweni.
USimona - Ngiqoqa Ibutho Lami
YiNkosi yokuvuswa kuphela uJesu oyokwazi ukukunikeza amandla okuqala futhi.
Simona - Yiba Emthandazweni Ongaguquguquki, yiba Amalangabi Othando
Bantabami, kulezi zikhathi ezinzima khuthalani kakhudlwana emthandazweni, makube amalangabi othando.
ISimona - Isikhathi Sokunquma
INdlovukazi yethu yaseZaro, e-Italy eya eSimona, ngoFebhuwari 26, 2019: Bantabami, musani ukuzivumela ukukhohliswa yi ...
← Kungani uLuz de Maria de Bonilla?
Kungani uPedro Regis? →